Online Hartha - Page 475 of 477 - News and Entertainment
April 26, 2020 by Online Hartha
အပျိုကြီးများရဲ့ ဒုက္ခ…ဒီလိုပြောတော့ ကျတော့်ကို အပျိုကြီးများက ဆဲလိမ့်မယ်….။
အပျိုကြီးဆိုတာအပျိူ​ ​လေးဘဝတုန်းက ချေခဲ့သမျှ ခုချိန်မှာ တိုင်ပတ်တာပဲ… လေးဆယ်ကျော်မှ ဘဝက စတာ မဟုတ်ဘူး သုံးဆယ်ကျော်တာနဲ့ ဖူးစာကဆုံးတာ… မြားနတ်မောင်က အန်ဖရန့်လုပ်ပြီးပြီ အောင်သွယ်တော်ပေ့ခ်က ဘလော့ခံရပြီ… ဗေဒင်ဆရာတွေတောင် အပျိူ ကြီး အချစ်ရေးမဟောပါလို့ ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ရပြီ မခူးပဲ ကြွေမကျရဲ ခူးတော့လည်း ပဲပေးနေပြီး လှည့်ထွက်သွားမှ မှည့်နေပါပြီ အော်လည်း မရတော့ဘူး…. ခက်တယ် ခက်တယ် အပျိူ ကြီးဆိုတာ တိုင်မပေါ်တဲ့ ဆင်းကဒ်လို (Helloတစ်ခွန်းနဲ့လိုရာမရောက် ) ပရိုမိုးရှင်းကာလနဲ့လည်း မရ ဒစ်စကောင့်နဲ့လည်း မဖြစ် မိဘကို တစ်သက်လုံး ဒုက္ခပေးမယ့်အထာနဲ့ အပျုိူ ကြီး လုပ်မှာလို့ ( အငိုမျက်လုံး အပြုံးမျက်နှာနဲ့ပြောသေးတာ ) မရတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မယူတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆွဲဖဲပဲ … Read more
တောသားနှိမ်နင်းရေး သခင်ကြီးဆိုသူ အရိုက်ခံရပြီး ဆေးရုံရောက်
April 25, 2020 by Online Hartha
တောသားနှိမ်နင်းရေး သခင်ကြီးဆိုသူ အရိုက်ခံရပြီး ဆေးရုံရောက် သူ့ကိုယ်သူ သခင်ကြီးတောသားနိမ်နင်းရေးဆိုသူ အရိုက်ခံရကာဆေးရုံရောက် သွေးထွက်လွန်ပြီး သွေးအလှူရှင်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။ ယနေ့မနက်က အိုးဘိုထောင်တွင် အရိုက်ခံရကာ ဝေဘာဂီဆေးရုံတွင် အတွင်းလူနာအဖြစ်တင်ထားသော ဝင်းကိုကိုလတ်သည် သွေးထွက်လွန်ကာ သွေးအလှူရှင်လိုအပ်နေ ။ ယခုထိ သွေးအလှူရှင်မရှိသေး ။ သူ့ရဲ့ သွေးအမျိုးအစားမှာ AB အမျိုးအစားဖြစ်နေသည် ။ သွေးလှူမယ့်လူရှိလား ခင်ဗျာ ။ www.innlaymedia.com | Inn Lay Media unicode တောသားနှိမျနငျးရေး သခငျကွီးဆိုသူ အရိုကျခံရပွီး ဆေးရုံရောကျ သူ့ကိုယျသူ သခငျကွီးတောသားနိမျနငျးရေးဆိုသူ အရိုကျခံရကာဆေးရုံရောကျ သှေးထှကျလှနျပွီး သှေးအလှူရှငျအရေးပျေါလိုအပျနတေယျလို့ သိရပါတယျ ။ ယနမေ့နကျက အိုးဘိုထောငျတှငျ အရိုကျခံရကာ ဝဘောဂီဆေးရုံတှငျ အတှငျးလူနာအဖွဈတငျထားသော ဝငျးကိုကိုလတျသညျ သှေးထှကျလှနျကာ … Read more
မယားကြောက် (မ.ယ.က) ကြီးတွေကို အထင်တော့ သွားမသေးလိုက်နဲ့နော်
မယားကြောက်သူတွေ ဟာ ဆင်ခြေပေးဖို့အတွက် စဉ်းစားရင်းကနေ ဥာဏ်ပိုကောင်းလာတတ်တယ် မယားကြောက်​ တစ်ခါက.. အင်မတန် မိန်းမကြောက်ရတဲ့ မွိုင်ရှီအမည်ရှိ လက်သမားဆရာတစ်ဦး ရှိပါသတဲ့..။ တစ်နေ့တော့ လက်သမားဆရာဟာ သူပြုလုပ်ဖန်တီးထားတဲ့ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ ပစ္စည်းတွေကို မြို့တစ်မြို့မှာ သွားရောက်ရောင်းချခဲ့တယ်။ အဲဒီလို ရောင်းချပြီး ငွေကြေးများစွာကိုလည်း ရရှိခဲ့တယ်။ လက်သမားဆရာဟာ သူရရှိလာတဲ့ငွေကြေးတွေကို အိတ်တစ်လုံးနဲ့ သေချာစွာထုတ်ပိုးပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ တောလမ်းတစ်နေရာအရောက်မှာတော့ သေနတ်တစ်လက်ကိုင်ထားတဲ့ ဓါးပြတစ်ယောက်က သူ့ကို ဓါးပြတိုက်တယ်.. “ဟေ့လူ.. ခင်ဗျားမှာ ငွေအများကြီးပါတယ်ဆိုတာ ကျုပ်မြို့မှာကတည်းကသိပြီးသား၊ ယီးတီးယားတား လုပ်မယ်တော့မကြံနဲ့၊ ဇီးသီးနွား စားသလို အသက်ပါပျောက်သွားမယ်၊ လာထား ခင်ဗျားရဲ့ငွေထုပ်” ဓါးပြဟာ ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ လက်သမားဆရာကို သေနတ်နဲ့ထောက်လိုက်တယ်..။ အဲဒီအခါ လက်သမားဆရာကြီးက “မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ..။ အိမ်ကို ငွေပြန်ပါမလာရင် ကျွန်တော့်မိန်းမက … Read more
မသေခင်နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာ သူတို့သားအဖကိုပြစ်သွားတဲ့ အမေဖြစ်သူနဲ့ ( ၁ ) ကြိမ်လောက်တွေ့ပါရစေလို့ ဖခင်ကို တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်…
မသေခင်နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာ သူတို့သားအဖကိုပြစ်သွားတဲ့ အမေဖြစ်သူနဲ့ ( ၁ ) ကြိမ်လောက်တွေ့ပါရစေလို့ ဖခင်ကို တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်… လင်မယားကွာရှင်းတဲ့ကိစ္စဟာတစ်ကယ်တမ်း မလွယ်ကူပါဘူး။ ဘာလို့လည်းဆို အဲ့ဒီဒဏ်ကို အဓိကခံစားကြရသူတွေကတော့ ကလေးငယ်တွေဖြစ်လို့ပါ။အဲ့ဒီဒဏ်တွေကြောင့် ကလေးငယ်တွေရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပျက်ဆီး ယိုယွင်းလာတတ်ကြပါတယ် ။ တရုတ်နိုင်ငံက အသက် ၈ နှစ်အရွယ်ကလေး ငယ်ဟာ မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါခံစားနေရသူဖြစ်ပြီး သူမသေခင်အချိန်လေးမှာ သူ၏မိခင်နှင့် နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်ခန့်တွေ့ချင်ကြောင်းကို ဖခင်ဖြစ်သူအား တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတွက် လူအများကို အတော်လေိးုဝမ်းနည်းစေခဲ့တဲ့ပါတယ်။ ကလေးငယ်ရဲ့ မိဘနှစ်ပါးဟာ 2015 ခုနှစ်က ကွားရှင်းခဲ့ကြတာဖြစ် ပါတယ်။ကလေးငယ်ကိုတော့ ဖခင်ဖြစ်သူက တာဝန်ယူစောင့်ရှောက် ထားခဲ့တာပါ။ဖခင်ဖြစ်သူဟာဆိုရင် သားဖြစ်သူရဲ့ဆေးကုသစရိတ်ကို လုံလုံလောက်လောက် မထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပြစ်တင် ဝေဖန်နေသူလည်း … Read more
“STAY HOME ကာလမှာ ဘာမှမလုပ်ရလို့ အဆီပိုတွေ တက်လာနသေူများအတွက်”
STAY HOME ကာလမှာ ဘာမှမလုပ်ရလို့ အဆီပိုတွေ တက်လာနသေူများအတွက်…. ဗိုက်ခေါက်အဆီ၊ ခါးဆီ၊ ကျောဆီလို အဆီပိုတွေပဲ ကျချင်တယ် ဆိုသူများ အတွက် ဆေးနည်းကောင်းတလက် အချိန်မကုန် လွယ်ကူ သက်သာတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပေမယ့် နည်းလမ်း မှန်မှန်နဲ့တော့ ဇွဲရှိရှိ လုပ်ရပါမယ် ။ ပါဝင် ပစ္စည်းများ ကတော့ သံပုရာသီး တစ်လုံးဂျင်း လက် တစ်ဆစ်ခန့် နဲ့ပျားရည် ၂ ဇွန်းခန့်ပထမဆုံး သံပုရာသီးနဲ့ ဂျင်းလက် တစ်ဆစ်ကို အခွံမခွါပဲ ရေစင်စင်ဆေး ပါပြီးလျှင် နှစ်မျိုးလုံးကို အကွင်းလိုက်ပါးပါးလေး လှီးပေးပါ။ ကော်ဖီ တစ်ခွက်စာ အဖုံးပါသော ကြွေ သို့ဖန်ခွက် တစ်ခွက်ထဲသို့ထည့်ပြီး ပျားရည် ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်းထည့် ပါပြီးရင် ရေနွေး ဆူဆူ … Read more
မန္တလေးဆေးရုံကြီးတွင် တစ်ရက်တည်း စောင့်ကြည့်လူနာ ခုနစ်ဦး သေဆုံးမှု အခြေအနေများကို ဆေးရုံအုပ်ဒေါက်တာဒေါ်စုစုဒွေး Live လွှင့်ရှင်းလင်းပြီ
မန္တလေးဆေးရုံကြီးတွင် တစ်ရက်တည်း စောင့်ကြည့်လူနာ ခုနစ်ဦး သေဆုံးမှု အခြေအနေများကို ဆေးရုံအုပ်ဒေါက်တာဒေါ်စုစုဒွေး Live လွှင့်ရှင်းလင်းပြီ… မန္တလေးဆေးရုံကြီးတွင် တစ်ရက်တည်း စောင့်ကြည့်လူနာ ခုနစ်ဦး သေဆုံးမှု အခြေအနေကိုများကိုဆေးရုံအုပ် ဒေါက်တာဒေါ်စုစုဒွေး Live လွှင့်ရှင်းလင်းတင်ပြ ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးမှာတင်ပြထားပါတယ် credit Hein Si Thu unicode version မန်တလေးဆေးရုံကွီးတှငျ တဈရကျတညျး စောငျ့ကွညျ့လူနာ ခုနဈဦး သဆေုံးမှု အခွအေနကေိုမြားကို ဆေးရုံအုပျဒေါကျတာဒျေါစုစုဒှေး Live လှငျ့ရှငျးလငျးတငျပွ credit Hein Si Thu မန္တလေးဆေးရုံကြီးတွင် တစ်ရက်တည်း စောင့်ကြည့်လူနာ ခုနစ်ဦး သေဆုံးမှု အခြေအနေကိုများကိုဆေးရုံအုပ်ဒေါက်တာဒေါ်စုစုဒွေး Live လွှင့်ရှင်းလင်းတင်ပြ credit Hein Si Thu မန်တလေးဆေးရုံကွီးတှငျ တဈရကျတညျး စောငျ့ကွညျ့လူနာ ခုနဈဦး … Read more
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရပေမယ့် မြန်မာ့ရိုးရာဆေးနည်းနဲ့ ပဲ ပြန်ကောင်းလာသူ
“ရင်ဘတ်ထဲမှာလည်း ယားကျိကျိနဲ့ပါ ကိုရိုနာရယ်” ဒီတစ်ခါက လင်းပြောစရာရှိလို့ရင်ထဲ ယားကျိကျိ ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူးရှင့်။တကယ့်ကို ရင်ထဲ ယားကျိကျိဖြစ်ပြီး ချောင်းတွေဆိုးနေတာ။ကိုရိုနာကြောင့်ပါ။ ဒီနေ့ ဆို ရောဂါလက္ခဏာ စပြတာ ၈ ရက်မြောက်နေ့ လို့ရေတွက်ထားတဲ့နေ့ ။လူက နေပြန်ကောင်းလာတဲ့ လက္ခဏာလေးတွေ (Recovery symptoms)လေးတွေ စပြနေပြီ။ မနေ့က ပုဇွန်ကြော်နဲ့ထမင်း ၂ ပန်းကန်၊ ငါးပိရည်နဲ့ ပုဇွန်ခြောက်နဲ့နယ်တာက ထမင်း ၂ ပန်းကန်စားတယ် ဆိုတော့ တော်တော်တိုးတက်လာတယ် ဆိုရမယ်။စားပြီးရင်တော့ နုံးပြီး အိပ်ရာထဲ ဝင်ခွေနေတာ။အခုတလောက အိပ်တာရယ် စားတာရယ် ၂ ခုပဲ လုပ်လို့ ရတယ်။ အိပ်မပျော်ဘဲ အိပ်ယာထဲ လှဲနေတဲ့ အချိန်တော့ … Read more
အခုခေတ်မှာ လူတွေက ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်ညီတဲ့ လက်တွဲဖော်တွေ ရှာနေကြပါတယ်။ ဒီလို ချစ်သူ ကောင်မလေးမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရင်တော့ လက်ထပ်လိုက်ပါတော့..၊ ၁။ သူမက မင်းကို ယုံကြည်အားကိုးရင်..၊ အချစ်ဆိုတဲ့အရာက လူတွေကိုတောင် ရူးသွပ်စေတတ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ကို ရရှိထားတာဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်..။ ဒါပေမဲ့ မင်းက မင်းကို ချစ်နေတဲ့ ချစ်သူရထားရင် ကံကောင်းနေပြီလို့ ထင်ပါလိမ့်မယ်..။ အချစ်ဆိုတာဟာ အစွန်းနှစ်ဖက်ကို ရောက်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မင်းရဲ့ ဘဝလက်တွဲဖော်ကို အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ ဆုံးဖြတ်ပြီး မရွေးလိုက်ပါနဲ့..၊ သူမက မင်းကို ယုံကြည်အားကိုးပြီး မင်းရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ယုံကြည်ပြီး အမြဲ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးတတ်တဲ့ ကောင်မလေးမျိုး ရထားရင်တော့ လက်မလွှတ်ပါနဲ့တော့.. ၂။ သူမက မင်းရဲ့ ဒေါသကို ဖြေလျော့ပေးနိုင်ရင်..၊ လူတိုင်း … Read more
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကားတိုက်ခံရပြီး သေဆုံးသွားတဲ့ မြန်မာ ဇနီးမောင်နှံ (၂)ဦး”(မြန်မာပြည်က မိဘတွေသိအောင် ရှယ်ပေးပါဦး) ကျန်ရစ်သူ နှစ်ဖက်သောမိသားစုတွေနဲ့ထပ်တူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာဖြင့် 23/4/2020 ရက် ထိုင်းနိုင်ငံ ဆူလပ်မြို့နယ် ဒူးရမ်းသီးခြံလုပ်သားဇနီးမောင်နှံတို့နှစ်ဦး ဒီနေ့နံက်9:0နာရီ ဈေးသွားဝယ်ပြီး ဆိုင်ကယ်နှင့် ပြန်လာရာတွင်ကားတိုက်ခံထိ၍ အမှုဖြစ်သောနေရာတွင် နှစ်ယောက်စလုံးသေဆုံးသွားကြောင်း သူဌေးမထံ ဖုန်းက်မးမြန်းချက်အရ သိရပါသည် ဖြစ်စဉ်မှာ ကားမောင်းလာသူ ထိုင်းအမျိုးသမီးသည် ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် ရန်ဖြစ်ပြီး ဒေါသကြီးစွာဖြင့် ကားအရှိန်ပြင်းစွာ ညာဖက်ခြမ်း လမ်းကျော်မှားမောင်းခြင်းကြောင့် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောပြပါသည်။ သေဆုံးသူ ဇနီးမောင်နှံတို့ နှစ်ဦးသည်အလွန်ပင် စိတ်သဘောထားကောင်းကြောင်းနောက်ထပ် ဒီလိုစိတ်ထားကောင်းတဲ့သူမျိုးရှာမတွေ့နိုင်တော့ကြောင်း သူဌေးမမှ ဝမ်းနည်းစွာ ငိုကြွေးပြီးပြောပြပါသည်။ သေဆုံးသူဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးတို့သည် ကျနော်တို့ အလုပ်သမားအရေး စည်းရုံးရေးသွားဖူးစဉ်က ဒူးရမ်းသီးခြံအတွင်း နေအိမ်တွင် ထမင်းဟင်း ကျွေးမွေးဖူးပါသည် ဒူးရမ်းသီးလက်ဆောင် ပေးဖူးကြပါသည် နှစ်ယောက်စလုံးစိတ်ထားကောင်းပြီး … Read more
← Previous Page1 … Page474 Page475 Page476 Page477 Next →